Qalisa umsebenzi omtsha kuMbindi Mpuma kwaye ufumane umsebenzi eDubai
Qalisa Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma!
Imisebenzi eSaudi Arabia - Uluhlu lweenkampani e-Kingdom Saudi Arabia
Disemba 26, 2017
Jerry Varghese IiNkonzo zaMazwe ngamazwe
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Disemba 29, 2017
Qala Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma
Qalisa umsebenzi omtsha kuMbindi Mpuma. Uninzi lwakho mhlawumbi ndikhangela umsebenzi eDubai. I-Middle East ibonelela izibonelelo ezininzi zokuthengisa ngobani o khangela i-Oyile neGesi, IT, Ukuthengisa, ukuThengisa kunye Amathuba emisebenzi yeehotele eUnited Arab Emirates. Ngaphezulu kwe-80 ipesenti abafuna umsebenzi omtsha abazalwa e-Emirates. Uninzi lwazo lukhona Ma Indiya kwaye Pakistani iindwendwe ngaphakathi kwe-UAE. Baqala umsebenzi omtsha kuMbindi Mpuma kwakudala.
Awunakubekwa kuphela ngokudibanisa i-imeyile yakho apha ngezantsi. Kufuneka usebenze kakuhle ukuze ufumane umsebenzi. Ke kufuneka ubophe kanzima yonke imihla ngokukhangela umsebenzi ku-Mbindi Mpuma. Impendulo kuphela: Imali ikhona. Eyona ndlela inobulumko kukubhalisa kunye nokufumana umsebenzi nenkampani yethu ngaphakathi dubai. Kwimarike namhlanje kufuneka uzibuze okanye iqela lethu malunga indlela yokufumana umsebenzi kwi-UAE.
Abantu abaninzi abafuna umsebenzi banokubona izibhengezo malunga wenza njani add i-CV yakho yomsebenzi. Ngoko sihlaziya iphrofayile yakho namhlanje, kufuneka ubhalise uze ufumane umsebenzi wakho wephupha ne-Dubai City Company. Inkampani yethu ngoku ukuqeshwa kwezithuba ezahlukeneyo Phesheya IUnited Arab Emirates kunye neQatar. Nangona kunjalo, sinezicelo ezithile ezivela eSingapore, eOstreliya, Khanada kunye neNew Zealand. Senza ikakhulu kwizikhundla zolawulo ngokubanzi naseDubai. Kwaye oko kubandakanya ukuthengisa kunye nentengiso, ulawulo lwe-akhawunti, i-IT kunye yobunjineli e Dubai. Qala Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma.
Fumana Umsebenzi ngasekupheleni kwenyanga
Nceda ukongeza i-imeyile yakho ngezantsi kwaye siya kuzama Uluhlu olufutshane ekupheleni kwenyanga Okanye ngenye indlela jonga indawo yethu yokulayisha iwebhusayithi. Into ekufuneka uyenzile kukujonga iiphakheji zethu ezahlukeneyo kwaye iinkonzo kwiwebhusayithi yethu ukubona ukuba kufanelekile. Sinezithuba ezininzi ezivulekileyo zomsebenzi kwi-Australia, New Zealand, Canada ne-United Arab Emirates.
Injongo yethu kukuba Isisombululo sekharityhulam kubahlali abatsha base Dubai. Qala ukugxotha yakho msebenzi wephupha kwaye nceda ubhalise kunye Dubai City Inkampani. Iqela lethu lijonge phambili ekunxibelelaniseni nelethu Inkampani yase Dubai abameli kunye indawo nawe ungene UAE. Cofa kwaye ulandele iiprofayili zenkampani yethu kwaye uthumele isimemo kwinkampani yethu. Nxibelelana nathi ngqo namhlanje kwaye ujonge ukuba singakwenzela ntoni na.
Kungakhathaliseki ukuba uvelaphi, sinceda lonke ihlabathi. Umzekelo, Abantu basePakistan banako ukuqala umsebenzi. Ngoko, ngokwenene, kungakhathaliseki ukuba uvelaphi, inkampani yethu iya kunceda ukukufumana umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Ngexesha elifanayo, unokukhangela namanye amazwe. Enye yemizekelo iQatar kunye Iinkampani zase Saudi Arabia eziqesha.
Layisha kwakhona Qalisa ukuqalisa umsebenzi kwi-Dubai!
Ngaba ufuna ukufumana uYobhi Inkampani yase Dubai qalisa ngeengcali zokufuna uphando! Iqela lethu lisebenza kwisicelo ngasinye ukulawula amathuba emisebenzi emangalisayo. Omnye wemisebenzi engcono kakhulu esiyinikezelayo zokuthengisa izithuba zithuba kubafundi abasanda kuphumelela.
Elinye iphuzu eliphambili kwiphepha lakho lemisebenzi liqala namhlanje. Fumana msebenzi wakho wephupha e Emirates. Ngokuqinisekileyo Qalisa Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma. Iindawo ozoqala ngazo Ngaba iinkampani eziqeshwe kwiGulf. Imisebenzi ye-Careerjet kwingingqi yeGulf kwaye Phezulu kule website yokubasa kwiGulf. Bafanelekile ukufaka isicelo ngeCV yakho.
I-Dubai City Inkampani unako Qala Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma!.
Layisha kwakhona kwiSixeko esiKhukula ngokukhawuleza emhlabeni! Siyakunceda UFilipu uyazama ukufumana imisebenzi e-Dubai.
Iinkampani zase Dubai - Qalisa umsebenzi omtsha eMiddle East
I-Dubai City Inkampani isungulwe kwi-2019. Kodwa kufuneka sikhumbule ukuba inkampani yethu yokuqesha. Kwiimeko zonke, yonke imihla ukwenza imisebenzi yokufuna umsebenzi ayenzeli iDubai kuphela. Kodwa nakwilizwe le-GCC. Ukubonisa abathengi bethu abavela kumazwe angaphezu kwe-30. Inkampani yeDubai City unxibelelanisa ookhangelo lomsebenzi kunye nabaqeshi. Ukubeka enye indlela, iqela lethu elibonelela ngayo ukukhangela umsebenzi nceda ngophando malunga nomsebenzi wengingqi ulwazi eDubai.
Ngaphantsi kwezo meko, iinjongo zethu kukuba yinto yokuqala yokhetho lokutshintsha ngokukhawuleza ukuqeshisa kunye nokuqeshwa kwemakethi yomsebenzi webhinqa. Ngethemba lokuba indawo yethu yokusesha imisebenzi yenza abafunayo bemisebenzi ngamazwe kunye nabaviwa abatsha. Ngokuqhelekileyo uthetha ukuba kufakwe ithuba elimangalisayo lomsebenzi kwisixeko esakha ngokukhawuleza emhlabeni. Kuze kube ngoku, kukho i-1,000 yabaqeshi abadumileyo behlabathi kunye neenkampani zase Dubai.
E-Dubai, ungayifumana imisebenzi ehlawulwa kakuhle e-UAE. Ungayifumana imisebenzi ePorsche e Dubai. Kukho neenkampani ezininzi eziqeshisa e-Dubai kwi-2018. Ukukubeka ngenye indlela, silapha ukukunceda uqalise umsebenzi kwi-Dubai. Ukujonga Qalisa Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma ?. Ngenisa kwakhona kwiNkampani yeenqwelo moya ze-Emirates okanye inkampani yethu!
Umsebenzi eMiddle East
Ngexesha lonke Nkampani zase Dubai ukusebenza ngaphakathi kwazo zonke iimalike ze-4 ezinkulu: Ukuqeshwa, Ezengqesho, Imisebenzi kaRhulumente, uLawulo lweMisebenzi. Iqela lethu kungekudala ukukubeka eDaibha. Ngaphandle kweengxaki, ngakumbi kwi-UAE. Ukongezelela enye yeendlela ezilungileyo zokufumana umsebenzi fumana intetho yokuhamba-intanethi kwi-UAE.
Xa usenza uphando olululo kwimisebenzi e-Dubai. Kufuneka ucinge ngoku imisebenzi yokufundisa e-UAE. Le misebenzi yeyona ikhawulezayo ukufumana kwaye kulula kakhulu ukuyiqhuba udliwanondlebe. Umsebenzi omtsha kwi-Mbindi Mpuma ihlala ivulekile kubantu abatsha abasuka kwamanye amazwe. Umsebenzi kwakhona e-Abu Dhabi yindlela elungileyo yokwenza isixa esifanelekileyo sengeniso. I-Qatar kunye ne-Kuwait zikwindawo entle yokufika emsebenzini.
Ukufudukela eMiddle East kusoloko kuba ngumsebenzi onzima. Ukunyuka ukuya e-Dubai njenge-expat soloko sithatha ixesha kunye nemigudu. Kungakhathaliseki ukuba unzima kangakanani ukuzama ukuyifumana. Inkqubo iyafana nawaphi na amazwe eMbindi Mpuma. Qala Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma ngokusebenzisa inkampani yethu.
Abaxhamli njengomqeshwa omtsha e-UAE
I-Dubai City Inkampani inikezela amalungu ayo umthombo ongenakulinganiswa ulwazi lophando lwemisebenzi e-Emirates. Inkampani yethu yahlukile kwabanye. Kungenxa yokuba sithumela kugcwele imixholo enamandla kunye neyasekuqaleni. Ukukunceda nje qalisa umsebenzi omtsha. Iqonga lokukhangela umsebenzi linikezela ngamathuba othungelwano lwehlabathi kulo lonke utyelelo lwaseDubai. Inkqubo yethu yenzelwe ukuphucula iiprofayile zabafuna umsebenzi. Ukunceda iinkampani ukufumana umsebenzi omtsha. Kwaye iinkonzo zophando ezifanelekileyo zomsebenzi eDubai.
Abathunywa abavela kulo lonke elase-United Arab Emirates. Uninzi lwabo ukutyelela i-UAE ukukhangela umsebenzi kwaye ekugqibeleni, yi-20% yabo kuphela efumana ingqesho. Ke, ukuba ngaba ii-expats ezintsha ezijonge ukubekwa eDubai. Kufuneka usebenze nzima ukuyifumana kwiiprojekthi ezintsha. Iqela lethu lenza ukuba kwenzeke konke ukubanceda ngokubakhangela. Umthungi Qala Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma.
Inkampani yaseDubai City ngoku isebenza nzima ukubeka yonke umgqatswa sifumana. Akunandaba nokuba ivela eIndiya okanye eMzantsi Afrika. Ulawulo lwethu lusebenza kakuhle kubo bonke abafuna umsebenzi. Iqela lethu leengcali nalo lenziwe Dubai WhatsApp Amaqela. Yaye njengokuba kunjalo, oku kuye kunceda abantu abafuna umsebenzi we-20,000 e-UAE.
Iingcali zethu zokukhangela umsebenzi ziyingcali ezicetywayo zokucebisa
Inkxaso kunye nengxelo ngokukhangela kwakho komsebenzi yeyona nto iphambili. Inkampani yethu iqhube ngoqeqesho olunxibelelanayo kwiindidi ezahlukeneyo zezihloko. Kuba iDubai yiyo indawo efanelekileyo yokusebenza, ngakumbi ukubiza. Kwakhona, kufuneka uqaphele kumsebenzi webhanki icandelo. Inye yeyona ndlela ilungileyo yokuphuma eya kubantu abangathanda ibekwe e-Emirates.
Ngaphandle kokulibala, i-Dubai City Inkampani iye yanceda ngaphezu kwe150,000 + abafuna umsebenzi kwihlabathi jikelele. Okwangoku abagqatswa bethu be-expat bayeza ukuza kuthi ga ngoku abavela kumazwe angaphezu kwe-70. Kuhlalutyo lokugqibela, umbutho wethu ukukunikezela amathuba akhethekileyo Ukunxibelelana nabaqeshi e-UAE. Ngokukodwa xa usakha iprofayili yakho yomsebenzi kunye nokufumana amava axabisekileyo enyanisweni ukuze nje ukhulise umvuzo wakho.
Makukhunjulwe ukuba iinkokeli zoluvo ezinempembelelo. Kwaye ngokuqinisekileyo, abathathi bezigqibo kunye noosomashishini bajonge kuphela abagqatswa abahamba phambili. Kwicala elifanelekileyo, Unokuba yintliziyo ye-Dubai City mveliso. Ukuba unamava awaneleyo kwimarike yehlabathi. Ngokuqinisekileyo unokufumana umsebenzi kwi-United Arab Emirates. Umzekelo, uninzi lwe Abasebenzi baseNdiya bazimisele ukusebenza eMajuba. Ngoko ukuba uvela e-Indiya uza kuba nethuba elikhulu lokusebenza njengemoto. Qala Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma kwaye Layisha kwakhona.
IiAjensi zokuBasa kwi-UAE
Musa ukuchitha ixesha lakho ngokuthumela i-resume yakho kubasebenzisi ababi. Yilithumele kuphela ii-arhente ezigqwesileyo zokuqesha e-UAE. Kufuneka ulungele ukufumana indlela yokufumana Imisebenzi yase Dubai. Kwaye uqale umsebenzi omtsha kuMbindi Mpuma ngokukhawuleza. IsiXeko saseDubai yindawo entle yokwenyani yokuhlala nokusebenza. Kodwa ukufumana umsebenzi apho kwaye ukwazi ukulawula ubomi bakho. Kufuneka ulumke kakhulu kwinto nganye oyenzayo. Ubungqina obuninzi buyinyani kukunceda uhlawule umsebenzi wakho.
Iiarhente zokuqesha eUAE Ukujonga ngaphezulu kwe500 CV yemihla ngemihla. Kuninzi, kwicala elingelolakho, asinguwe wedwa ongenamsebenzi. Ngaphezulu kwe-95% yemisebenzi efuna ukufumana ikhondo elitsha lomsebenzi kwi-Middle East kwangoko. Fumana iMisebenzi emitsha eMbindi Mpuma ukusuka eIndiya. Qala Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma.
Ukuba oko kunokuba lula njengoko kuvakala ukuba kwenziwe. Seka kwinkampani yethu ukunceda ukufikelela nokulawula yonke iarhente yokuqesha. Kwangelo xesha isicelo sakho siqwalaselwe ngononophelo. Kuba u abakhangeli msebenzi kwaye iarhente yokuqesha ngoyena mntu unokukunceda ufumane umsebenzi. Zininzi izithuba zomsebenzi ongayisebenzisa kwiGoogle.
Ukuyibeka enye indlela, kuya kuthatha iinyanga ze-3 ukuthumela i-CV yakho. Kwaye ezinye iinyanga ze-3 zithumela iinkcukacha zakho zenkxaso Iinkampani e Dubai. Kwelinye icala, baqeshi zineenxa zonke zee-8-12 iiveki zokubeka umviwa. Nangona kunjalo kubaviwa bamazwe ngamazwe bangathatha ixesha elide.
Dubai imisebenzi Izikhokelo
Eyona ndlela ilungileyo ukusebenzela ingqesho ngokukhawuleza usebenzisa izikhokelo zethu zemisebenzi yeGhuba. Unokufumana umsebenzi omhle kakhulu ngokusebenzisa yethu WhatsApp kumaqela Dubai. Iqela lethu lolawulo lenze amaqela amangalisayo eDubai. Sinceda ukubekwa okutsha kubekwe kwi-United Arab Emirates. Isicelo esitsha sokuqesha si kuthunyelwa yonke imihla kwizikhokelo zethu zeDubai.
The Whatsapp Dubai Iinqununu zamaqela zenziwa ngabafunayo belizwe ngamazwe. Ingakumbi kubantu abanamava amahle. Umzekelo, ukuba ukhona Ukuba ne-MBA unokufumana umsebenzi e-Dubai. Ngale nto engqondweni, ungabekwa ngokwenene kwimisebenzi ehlawulwa kakhulu eDubai. Inkampani yaseDubai City iyinyani yokwazi kakuhle WhatsApp ukuqashwa ishishini. Ngokukodwa ukuba sithetha nge-Middle East.
Ngakolunye uhlangothi, unokujonga kwakhona WhatsApp for jobs icandelo. Kwaye ukuthumela iPostume yakho kumazwe aliqela kwizikhokelo zethu. Ngokujonga iqela lonke lweemfuno zokuqeshwa kweWhatsapp. Ungabona ngokucacileyo ukuba ngubani onokuqeshwa kwaye ngubani ongakwaziyo. Qala Umsebenzi omtsha eMbindi Mpuma kunye nenkampani yethu!
Ukukhangela imisebenzi e-Dubai ngendlela ehlakaniphile
Enye indlela ehlakaniphile fumana izithuba kwi-Dubai. Ukuthumela isoftware eninzi kakhulu kwiinkampani ezininzi. Umzekelo, ungasebenzisa inkonzo yokuhambisa kwakhona ukuze ubeke Ukukhutshelwa kwamanye amazwe kwiSixeko saseDubai. Ngokwenyani, kukho imisebenzi emininzi ebonelelwa ngokukhutshelwa ku-Middle East. Iqela lethu lenzile isikhokelo sokuthengisa iprofayili yakho e Dubai. Isizathu sitshixo ekufumaneni umsebenzi kwi-UAE.
Ngakolunye uhlangothi, i umsebenzi wefowuni ukuyikhangela kuya kuba yingcinga efanelekileyo yokujongana nayo. Siyakunceda imisebenzi eDairobi yabesifazane baseMzantsi Afrika E Dubai baxabisa olu hlobo lwamaxabiso.
Ungalokothi ushiye kwaye inhlanhla ngokufuna uphando kwi-Middle East!